China 99% CPC powder Cetylpyridinium chloride cas 123-03-5 Hexadecylpyridinium chloride fekitori nevatengesi | Dzidziso
99% CPC upfu Cetylpyridinium chloride cas 123-03-5 Hexadecylpyridinium chloride
Chemical Zita: Cetylpyridinium chloride
Anoreva zvakafanana: 99% CPC upfu; Hexadecylpyridinium chloride
Molecular fomura: C21H38ClN
Cetylpyridinium chloride / CPCupfu iquaternary ammonium compound uye ndiyo inoshanda kemikari mune kumwe kushambidza muromo kwevanhu pamusika. Iyo ine antiseptic zvimiro uye inoshandiswa mumhinduro kana lozenges yekurapa kwehutachiona hushoma hwemuromo nehuro. Basa reantimicrobial rinokonzerwa nekudyidzana kweacetylpyridinium ions ine acidic mamorekuru pane mabhakitiriya, ayo anozotadzisa hutachiona metabolism nekugadzira isina kusimba ionic makomputa anokanganisa kufema kwebhakitiriya.
Cetylpyridinium chloride CAS 123-03-5 ndiyo chloride munyu fomu ye cetylpyridinium, quaternary ammonium ine yakafara-spectrum antimicrobial chiitiko. Pamusoro pekufambiswa kwemusoro, cetylpyridinium chloride inobhadhariswa zvakanaka uye inopindirana neasina kubhadharwa microbial cell maspace, nokudaro ichiparadza kuvimbika kwenzvimbo yesero. Izvi zvinokonzeresa kubvaruka kwezvinhu zvemukati memasero zvinotungamira ku microbial cell kufa.
Cetylpyridinium chloride CAS 123-03-5 inonzi pyridinium munyu ine N-hexadecylpyridinium sekati uye kloride senion. Iyo ine antiseptic zvimiro uye inoshandiswa mumhinduro kana lozenges yekurapa kwehutachiona hushoma hwemuromo nehuro. Iyo ine basa seye antiseptic mushonga uye anoshanda. Iyo chloride munyu uye yakasanganiswa chloride munyu. Iine cetylpyridinium.
Cetylpyridinium chloride CAS 123-03-5 inogona kupihwa muhukuru hwekutengesa nemakwikwi mutengo.
Cetylpyridinium chloride ndeye quaternary ammonium komputa uye ndiyo inoshanda kemikari mune mumwe munhu
kushambidza muromo pamusika. Iyo ine antiseptic zvimiro uye inoshandiswa mumhinduro kana lozenges yekurapa
yehutachiona hudiki hweiyo muromo nehuro. Basa reantimicrobial rinokonzerwa nekudyidzana kwezvakakosha
cetylpyridinium ions ine acidic mamorekuru pane mabhakitiriya, ayo anozotevera inhibits bacterial metabolism
nekugadzira isina kusimba ionic makomputa ayo anopindira nekufema kwebhakitiriya.
White crystalline upfu
Heavy simbi （Pb）
Solution yakajeka & ruvara
1kg / bhegi, 5kg / atorwa, 10kg / atorwa, 25kg / atorwa
Kuchengetedza kunofanirwa kuve kunotonhorera, kuoma uye kufefetera.
Pashure: Liquid 30% LDAO Lauryl dimethyl amine oxide CAS 1643-20-5
Zvadaro: 100% yakachena yakasikwa Alpha Pinene mune yakawanda CAS 7785-26-4
High yepamusoro Dodecyl dimethyl Betaine / Lauryl b ...
Yakakwira mhando Lauryl amido propyl betaine CAS 42 ...
Mutengo wakanaka Oleyl dimethylamine cas 28061-69-0
Yakakwira mhando Oleamidopropyl betaine cas 25054-76-6
Yakakwira mhando 99% Dipropylenetriamines cas 56-18-8
Yakakwira mhando N, N-Dimethyldecylamine cas 1120-24-7